Tamang Samaj|Tamang|Tamang News|Portal – घेदुङ : तामाङ समाजमा चेतनाकाे बिकुल फुक्न जुर्मुराउनु पर्दछ-
Nov 26, 2016 admin Local News, Society
वाङजु वाअीबा तामाङ । काठमाडाैं । घेदुङ तामाङ समाजको एक साझा छाता संघठन हो । यसमा चासो राख्नु आम तामाङहरुको स्वतन्त्र हक पनि हो । तामाङ समाजमा हुँदै गरेको दमनको बिरुद्धमा बिगत ६० बर्ष पहिला देखि राज्यको बिपक्षमा ल्यारेङ मेरेङ हुँदै उभिरहेको छ । हरेक पटक निर्बाचित हुने घेदुङको कार्य अध्यक्षहरु कोहि गर्जेर गयो कोहि त्यति कै समय कटाएर गयो गर्न र गराउन भने कसैले सकिएन किनकी हामी तामाङमा चेतनाको अभाव शून्य छ र नेतृत्वले जिम्मेवारी बहन गर्न सकेको छैन । अहिलेको अबस्थामा युबा पुस्ताले घेदुङ सम्हालेको हेर्न इक्छुक छन तामाङ समाज, तर त्यो हुन सकेको छैन । यसमा कसको कमजोरी हो त्यो अन्योलमा नै छ । छुट्याउन सकिरहेको छैन । त्यसैले एक चोटि युबा पुस्ता जुर्मुराउन अबस्यकता छ । अबको नेतृत्वले आफ्नो कार्य शैली सुधारे पक्कै पनि एक दिन तामाङ समाज घेदुङ मय हुनेछ ।
तामाङहरुको बाक्लो बस्ती रहेको जिल्लाहरु काभ्रे, सिन्धुली,सिन्धुपाल्चोक,रसुवा,धादिङ,नुवाकोट,रामेछाप,मकवानपुर जस्ता कयौ जिल्लाहरुको जनताले घेदुङ नाम नै सुन्न सकेको छैन ! सुने पनि एक जनाको कार्यकालमा गरेको अनिमियतताको छापले मगज नै डाइभर्ट गरि दिएको छ । र अचेल घेदुङ नाम लिदा मुख बिगार्छन र आफ्नै बाटो लाग्छन । यो हुनुको दोष नेतृत्व पक्षलाइ जान्छ । त्यसैले नेतृत्व पक्षको बिपक्षमा केही थान स्वतन्त्र युबा उतृय अन्यथा नसोचे हुन्छ । त्यो भ्रम कसरी फाल्ने त्यता सोचेर अबको नेतृत्वले आफ्नो कार्य शैली सुधारे पक्कै पनि एक दिन तामाङ समाज घेदुङ मय हुनेछ ।
अबको अबश्यकता अबको घेदुङ एक अलग पृथक तरिकाले चल्न सक्नु पर्दछ । जसको लागि पुरानो कार्य शैलीलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ । उहीँ कपि गर्दै गर्जेर मात्रै परिबर्तन सम्भव छैन । हालको घेदुङ अध्यक्ष ज्युको कार्य शैली अहिलेको तामाङ समाजको माग हुन । त्यसलाइ आत्मासाथ गरेर हामीले हातमा हात जोडेर आवाज उठाउनु नै तामाङ समाजको मुक्ती हो । हरेक क्षेत्रमा रहेको तामाङले तामाङपन बोक्नु पर्यो र त्यो तामाङपनलाइ बाहिर प्रस्तुत गर्न घेदुङले जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नु पर्छ । घेदुङ माथी बर्षौ पहिले देखि लाग्दै आएको अमिट दाग मेटाउन घेदुङको मेम्बरहरुले आ आफ्नो ठाउबाट आजैबाट प्रोसेस चाल्नु पर्दछ । काम नगर्ने पदको लागि मात्रै घेदुङमा झुण्डिने परिपाटिको अन्त्य यहि कार्यकालबाट हुनु पर्छ । प्रदेश जिल्ला र गाबिस हुँदै गाउँ गाउँ घेदुङको बिगुल बझ्न सक्नु पर्दछ । अनि मात्रै घेदुङको बारेमा तामाङ समाजले बुझ्न सक्छ र अभावको महसुस गर्न सकिन्छ ।
जिल्ला घेदुङहरु प्रतीको भ्रम जहाँ जसको बर्जस्व छ त्यहा त्यसैको ताली बज्छ । अनेक बिचारको मैदानमा रोमलिरहेको तामाङ समाज एक न एक बैचारिक पाटोमा उभिनु स्वभाबिक हो । त्यसरी नै हाम्रो तामाङ समाज एक न एक पार्टीमा अल्झिरहेको छ त्यसमाथी भेडा मगज भएको हाम्रो समाजमा हाम्रो भन्दा नि मेरो भन्नेमा अलि जोड दिन्छ । अचेलको युबा शक्तिमा छुट्याउन सक्ने क्षमता अलि कम नै छ जसले जता ततायो उत्तै उत्तै ताप्न जाने प्रबृती छ । त्यो हुनुमा नेतृत्व पक्षको दोष हो किनकी चेतनाको बिगुल फुक्न सकिन्न भने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर बस्नु बुद्धिमानी हो । तर हाम्रो नेतृत्व पक्षमा त्यो छैन । त्यसैको प्रतिफल हो अचेल हामिले देख्ने गरेको एकै पार्टिको भेला लाग्ने गरेको घेदुङको कार्यक्रमहरु, जुन जिल्लामा जुन पार्टिको नेतृत्व छ त्यसैको आसेपासे जम्मा हुनु अचम्म मान्नु पर्ने कुनै अबस्था होइन । तर त्यसलाइ अबको दिनबाट संयुक्त तिर जोड दिनु हाम्रो चुनौती र उपलब्धिको बिषय हो । हामिले समुदायको मुक्तिको लागि पार्टिगत स्वार्थहरु त्याग्न सक्नु पर्दछ जसरी घेदुङ अध्यक्ष ज्युले अपनाउनु भएको छ । त्यसैले आजै देखि पदको लागि भन्दा समुदायको लागि जोड दिनु जरुरी छ । र सबै सामु साझा अबधारण बोकेर सर्बदलिय एजेण्ड बनाएर अगाडि बड्नु पर्छ ।
सुझाब अब परिबर्तन हुनै पर्छ ।म्हेमेको काङलिङको धुनमा मस्त निधाएको नि युगौ बितेछ ! त्यो उभिएको डाँडा बुढा हुँदै गएछ र त भत्किन्छ हरेक साउने झरीमा याद गरेको छौ ? हाम्रो नि तामाङपन यसरी नै मासिदै जान्छ्न कुल फोलाहरु मेटिदै जान्छन त्यसैले अब पार्टिगत स्वार्थ फालेर सामुदाय मुक्तिको लागि आउनुहोस हातमाहात मिलाएर अगाडि बडौ । यस्तै यस्तै मुक्तिको अध्ययहरुको ठेली बोकाएर हिड्नुहोस अनि तपाइको पछि 16/18 लाख तामाङहरु हुनेछन। घेदुङको छाता मुनि रहनेछौ । अध्यक्ष ज्यु बाहेक कोहि संग यो आँट जन्मिएको छ ?
tweet ९० प्रतिशत बुद्ध धर्म मान्ने थाइ जनतालाई बुद्ध नेपालमा जन्मिएको थाहा छैन्
आदिवासी जनजाती महासंघ कुवेतको प्रथम ऐतिहासिक अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा रमेश राई चट्याङ